ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်သင်ကြားလိုသူတိုင်း အတွက် (၂၅%)ပညာသင်ဆုနဲ့သင်ကြားခွင့်ပေးအပ်မယ့် Dusit Thani College - Crown Education
May 30, 2020 Crown Online Education Fair 2020
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်သင်ယူမယ့်ကျောင်းသား/သူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ယူတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရေး၊
စာသင်စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဘွဲ့ဒီဂရီရယူနိုင်ရေး၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံရရှိဖို့သာမက ပညာသင်ဆုတွေနဲ့ သက်သက်သာသာသင်ကြားနိုင်ရေးစတဲ့အချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။
CROWN Online Education Fair 2020မှာ မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေအတွက် အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက Dusit Thani Collegeနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Dusit Thani College(DTC)ဆိုတာက – ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်သင်ယူမယ့်ကျောင်းသား/သူတွေအတွက် အသက်သွေးကြောလို့ဆိုရမယ့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် internshipကောင်းကောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ Dusit Thani Collegeက အပြည့်အဝကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Dusit Thani Collegeဟာဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း(၁၄)နိုင်ငံမှာ ဟိုတယ်နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ အောင်မြင်မှုအခိုင်အမာနဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ Dusit International Hotel Groupလုပ်ငန်းစုပိုင် ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကဘဲ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ရရှိထားသလို Hospitality and Culinary Artsသင်ကြားပို့ချမှုအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ The World Association of Chefs’ Societies (Worldchefs)ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေအတိုင်းသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာပဲ စာတွေ့+လက်တွေ့သင်ကြားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲExchange Programတွေနဲ့ ဂျပန်၊ဟောင်ကောင်၊ဆွစ်ဇာလန်၊ပြင်သစ်အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာသွားရောက်သင်ကြားနိုင်ဖို့လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားသလို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Lausanneမြို့ကEcole Hôteliere de Lausanne (EHL)နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံက Le Cordon Bleuကျောင်းတွေမှာပါ သွားရောက်သင်ကြားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးထားရှိပေးထားပါတယ်။ ကျောင်းအပြီးအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင် Dusit Thani College(DTC)မှာတက်ရာက်ပြီးစီးထားတဲ့ကျောင်းသား/သူတွေအနေနဲ့ ကျောင်းအပြီး(၃)လအတွင်းအလုပ်အကိုင်ကောင်းရရှိမှုနှုန်း (၉၅%)နဲ့အထက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။�
Dusit Thani College(DTC)မှာ မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေက –
Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Hotel and Resort Management (Certified by Ecole Hôteliere de Lausanne (EHL)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Professional Culinary Arts (Joint Program with Le Cordon Bleu) တွေဖြစ်ပြီး မြန်မာကျောင်းသား/သူတွေအတွက် (၂၅%)ပညာသင်ဆုတွေလျှောက်ထားခွင့်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
Dusit Thani Collegeမှာ (၂၅%)ပညာသင်ဆုနဲ့ သင်ကြားခွင့်အပြင် ထိုင်း+ပြင်သစ်(၂)နှစ်နိုင်ငံကသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ Joint Degree Programကျောင်းဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် “CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020”မှာ Dusit Thani Collegeရဲ့ တာဝန်ခံနဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ CROWN Educationက စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
ပါဝင်ပြသမည့်တက္ကသိုလ်များစာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်၊ ပညာရေးပြပွဲနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကို အခမဲ့တက်ရောက်ရန်၊ အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် Form ဖြည့်ကာ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ဩစတြေးလျမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ စဉ်းစားထားရင် အိမ်ကနေတက်ရောက်လေ့လာသင့်တဲ့ Onlineပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
May 21, 2020 Phone Letyar Crown Online Education Fair 2020
[CROWN ONLINE EDUCATION FAIR 2020, June 6, 7] Registration: bit.ly/crownfair . ➡️ အင်္ဂလန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကကျောင်းသား/သူတွေ (၈၀%)လောက် သွားရောက်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက် ရွေးချယ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေရှိတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ပညာသင်ဆုလဲ လျှောက်ထားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသား/သူတွေအတွက် Nottingham Trent University က ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ (၅၀%)ပညာသင်ဆုတွေက သင့်အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် . ➡️ Nottingham Trent Universityဟာ တစ်နှစ်ကို ကျောင်းသားပေါင်း (၆၂,၀၀၀)ဝန်းကျင်လောက်ကို ...